Nabddoono iska fogeeyay dibad-bax looga soo horjeedo heshiiskii Garowe – Radio Daljir
Febraayo 19, 2011 12:00 b 0
Galkacyo, February, 19 – Qaar ka mida nabaddoonnada gobolka Mudug ayaa iska bari-yeelay muddaaharaad looga soo horjeedo heshiiskii Garowe ay ku gaareen dawladda Puntland iyo maamul-goboleedka Galmudug. Nabaddoonnadu waxa ay sheegeen in muddaaharaadkaasi uunan matalin aragti beeleed, balse uu gaar ku yahay dadkii soo qaban-qaabiyay oo tabasho gaar ah qabay.
Nabaddoon Bashir Maxamuud Dalmar iyo nabaddoon Cabdi Diiriye Guuyo oo la hadlay Radio Daljir ayaa sheegay in dadkaasi ay xor u yihiin cabbirka fikirkooda balse ayan ku hadli karin magaca beesha ay ka soo jeedaan loona nisbeeyn karin. Nabaddoonnadu waxa ay sheegeen in arrimaha siyaasadda ay dawladdu ku matasho dadkeeda iyaguna ay dadka ula siman yihiin.
Dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad ayaa Daljir u sheegay in muddaaharaad kooban uu ka dhacay saaka magaalada Gaalkacyo, wuxuuna intaa ku daray in uu ahaa aragti iyaga u gaar ah oo ayan cidna ku matalin.
Saaka ayaa waxa bartamaha magaalada Gaalkacyo ka dhacay dibad-bax looga soo horjeedo heshiiskii dawladda Puntland iyo Galmudug. Dibadbaxan ayaa sida lasoo tabiyay waxa dadka kula hadlay siyaasiin iyo nabaddoono caan ah oo ay ka mid yihiin Dr. Bashiir Cali Biixi, wasiirkii hore ee caafimaadka Puntland iyo nabaddoon Yaasiin Cabdisamad.
Farxaan James Cabdille,
Radio Daljir, Galkacyo